အချစ်ဆိုတာ ဆေးဆိုးထားတဲ့ နင့်ဆံပင်တွေလိုပဲ ဇင်ဇင်
“အချစ်ဆိုတာ ဆေးဆိုးထားတဲ့ နင့်ဆံပင်တွေလိုပဲ ဇင်ဇင်”
မထင်မှတ်တဲ့လမ်းတစ်နေရာမှာ လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နှစ်ကာလအချို့က ငါ့ကိုဆူးတွေလိုလာငြိတယ်
နင်တော်တော်ပိန်သွားတယ် ဇင်၊ နေရောကောင်းရဲ့လား၊ ဆံပင်တွေလည်း တိုသွားတယ်
ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ တစ်ခုခုတော့ဖြစ်သွားတယ် ဇင်။
ကဗျာဆရာဆိုတာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လူ့ဘဝဒုက္ခကို အဆပေါင်းများစွာ ကြီးကျယ်ကြောက်လန့်သွားအောင်
တကယ်ပါ ဇင် … ကျွန်တော်အခု ဒုက္ခရောက်နေတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကအတိုင်းပဲ၊ မိုးရေတွေထဲမှာ မြုပ်နေခဲ့တဲ့ နင့်ခြေသန်းလေးကို ငါပြန်ရှာမရတော့သလိုပဲ
အခုလည်း ငါ့ရှေ့တည့်တည့်ကနင့်ကို ငါပြန်ရှာမရဘူး၊ ငါ့ကိုယ်ငါလည်း ရှာမရဘူး
ငါသိပ်ကြောက်ခဲ့တဲ့ မှော်ဆရာမ .. ဇင်၊ အခုထိလည်း နင့်ကိုငါ ကြောက်နေတုန်းပဲ
ငါ့စိတ်ကိုငါ ပျော်ရွှင်မှုထဲ ပို့ကြည့်တယ်၊ မရောက်ဖူးတဲ့ Disney Land ကို စိတ်နဲ့သွားကြည့်တယ်၊
ငါရုပ်ရှင်ဝင်ကြည့်တယ်၊ ငါသိပ်သွားချင်တဲ့ နယူးယော့ခ်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်လေးဆီ စိတ်ကူးကြည့်တယ်၊
မရဘူး ဇင်၊ နောက်ဆုံးတော့ မိုးရေတွေပြည့်နေတဲ့ လမ်းကြားလေးတစ်ခုထဲကိုပဲ ငါပြန်ပြန်ရောက်သွားတယ်
ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျနေတယ်၊ ဒေါသထွက်နေတယ်၊ လူသတ်ချင်စိတ်ပေါက်နေတယ်၊ စက်ဘီးတွန်းလာတဲ့ကောင်ကို ငါတွန်းထိုးပစ်လိုက်ချင်တယ်၊ ငါ့မိုးကာအကျီ င်္လေးကို ငါပြန်လိုချင်တယ်
ငါစိတ်ကူးနေတာက သိပ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ကမ္ဘာအကြောင်း၊ သန်းချီနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအကြောင်း၊
လူဟာ သူ့ဖြစ်တည်မှုအတွက် တစ်စုံတစ်ရာရဲ့ စားသုံးမှုကိုခံနေရတဲ့အကြောင်း၊ Facebook ထဲက ရယ်စရာကောင်းတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေအကြောင်း၊ ပျော်စရာညနေခင်းတွေအကြောင်း၊
မရဘူး ဇင်၊ ဘယ်လိုမှမရဘူး။ ငါရေးချင်တာတွေအစား နင့်နာမည်ကိုပဲ သတိလက်လွတ် ချရေးမိလျက်သားဖြစ်နေတယ်။
ငါ့စိတ်တွေလောင်ကျွမ်းမသွားခင် ငါ့ရှေ့ကထွက်သွားပေးပါလား ဇင်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ငါတစ်ခုခုကိုဆက်တွေးနေမိလိမ့်မယ်။
နင့်ကိုမှ မုန်းလို့မရတာ … အဲဒီ ညနေကို ငါမုန်းတယ် ဇင်
သွေးတွေစွန်းနေတယ် ၊ အသွားခြောက်လက်မနဲ့ တဆုံးထိုးချပစ်လိုက်
“သွေးတွေစွန်းနေတယ် ၊ အသွားခြောက်လက်မနဲ့ တဆုံးထိုးချပစ်လိုက်”
လက်လေးသစ်စာလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်သွားတာနဲ့ အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာမှာ ၊ ထိုးချပစ်လိုက် ။
ဒါ .. ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စကြီးပဲ ၊ မဟာအောင်ပွဲပဲ ၊ ဒါကိုလိုချင်တာမဟုတ်လား
ဒီလိုဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်လားလို့ မေးစရာမလို ။
စားပွဲခင်းကို ဆွဲလှန်ပစ်လိုက်ပြီ ၊
ရင်ဝကိုပုလင်းကွဲနဲ့ ထိုးစိုက်လိုက်ပြီ ၊
သွေးထွက်သံယိုဖြစ်နေတာကို အေးခဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်လိုက်ပြီ ။
ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ ဒါဖြစ်ချင်တယ်ကွာလို့ မိုက်ကြေးခွဲလိုက်ပြီ ။
ဒီခြုံထဲမှာ ဒီယုန်တွေရှိတယ် ၊ ပစ်ကွင်းတည်တယ် ၊
တောခြောက်ခံရတာသေချာတယ် … ဒါမျိုးတွေက အံတိုနေပြီလို့ပြောတယ် ။
ခပ်တည်တည်လှည့်ထွက်ခဲ့တယ် ၊ မထီတရီပြုံးတယ် ။
သူရဲကောင်းလား ၊ မုဆိုးလား ၊ လူမိုက်အထာလား ကွဲကွဲပြားပြားမရှိသေးဘူး
ပြောရေးဆိုခွင့်အတိုင်း ပက်ခနဲ ပြောချလိုက်တယ်ဆိုတာလည်း အနုပညာပဲ ။
တဆုံး …. ထိုးတယ်ဆိုတာ ဒီမှာကြည့်ကွ
လူတစ်ဦးလျှင် ဝါသနာတစ်မျိုးစီ ရှိတတ်ကြသည့်အထဲတွင် ကျွန်တော် ထက်ထက်သန်သန် ဝါသနာပါသော အလုပ်မှာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်က ရှေ့ကနေ ကာဆီးကာဆီး လုပ်တတ်သဖြင့် ကောင်းကျိုးလည်း များခဲ့ပါ၏။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေစဉ်က သချာင်္နေ့တွင် တစ်ပုဒ်တွက်လိုက် “ငါ့အဖြေက မှန်မှ မှန်ရဲ့လား” ဟု စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် နှစ်ခေါက်လောက် ပြန်စစ်လိုက်၊ တစ်ပုဒ်တွက်လိုက် နှစ်ခေါက် သုံးခေါက် စစ်လိုက်ဖြင့် ဖြေချိန် သုံးနာရီမှာ နှစ်နာရီလောက် ပြန်ပြန်စစ်နေမိသဖြင့် သချာင်္အမှတ် မကောင်းခဲ့သည်က တစ်ခါ၊ အသက်ကလေး ဆယ့်ခြောက်နှစ် ဆယ့်ခုနစ်နှစ် အရွယ်ရောက်၍ လူပျိုပေါက်သဘာဝ ရည်းစားသနာ ထားချိန်တွင် ကိုယ့်ရည်းစားက ကိုယ့်ကိုမှ ချစ်ရဲ့လားဟု တွေးတွေးပြီး စိုးရိမ်နေတတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုမချစ်ချစ်အောင် စကားအထုပ်ဖြင့် ချုပ်ရင်းပွားရင်းက “မသောက်ဘဲ ဒီလောက်ရစ်နိုင်တာ ဒင်းပဲရှိတယ်” ဟူသော မှတ်ချက်ဖြင့် ရည်းစားက စိတ်ကုန်၍ ထားသွားသည်က တစ်ခါ၊ မှတ်မှတ်ရရ ထိုနှစ်ခါလောက်ကလွဲလျှင် စိုးရိမ်တတ်သည့်စိတ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်မည့်ဘေးက အခါခါ လွဲဖယ်ခဲ့ ဖူးပါသည်။ ထိုသို့သော သကောင့်သား ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာလောက၊ အိုင်တီလောက ရောက်သော အချိန်တွင်တော့ ထိုစိုးရိမ်စိတ်က ကျွန်တော့်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ပညာပြပါတော့သည်။ ကိုးတန်း ဆယ်တန်း အရွယ်လောက်ကတည်းက သူများတွေ တဂျောက်ဂျောက်နှိပ်တာကို အားကျပြီး ကွန်ပျူတာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော် ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီး ထားခဲ့ပါသည်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးချိန်မှစ၍ ခြေရော လက်ရော ခေါင်းပါမကျန် ကွန်ပျူတာ လောကထဲ ပစ်ဝင်မည်ဟူသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ စတက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ ကွန်ပျူတာသင်တန်း စတက်ခွင့်ရသည့် နေ့မှာပင် ကျွန်တော်နှင့်အတူ ကျွန်တော့် အပေါင်းအပါကြီး စိုးရိမ်စိတ်က ထပ်ချပ်မကွာ သင်တန်းသို့ လိုက်ချလာပါသည်။ ကျွန်တော့် အစဦးဆုံး ကွန်ပျူတာလောကနှင့် ပတ်သက်သည့် စိုးရိမ်စိတ်မှာ ဘာဖြစ်မည်ထင်ပါသနည်း။ သင်တန်း အပေါက်ဝတွင် သူများတွေနှင့်အတူ ချွတ်ထား ခဲ့ရသည့် ဖိနပ်ကလေးကို “ဘယ်သူများ မှားစီးချင်ယောင်ဆောင်သွားမလဲ” ဟူသော စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ရှေ့တည့်တည့်က ဆရာမ ဘာတွေသင်နေလဲဟု စိတ်ဝင်စားဖို့တောင် သတိမရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထပ်ခါထပ်ခါ စိုးရိမ်စိတ်ကို မချုပ်တည်းနိုင် တော့သည့်အဆုံး အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက အပေါ့အပါးသွားခါနီး ခွင့်တိုင်သည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် မတ်တပ်ရပ်၊ လက်ညှိုးလေး တစ်ချောင်းထောင်ကာ ဆရာမကို “ပလိစ် … အိတ်စ်ကျုစ်မီ” ဟုအော်ရင်း အပေါက်ဝတွင် ချွတ်ထားသော ဖိနပ်ကလေးကို ကြွတ်ကြွတ်အိတ်ဖြင့် ထုတ်လာပြီး ခုံအောက်တည့်တည့်တွင်းထား၍ ခြေထောက်ဖြင့် ဖိထားလိုက်မှပင် ကျွန်တော့်စိုးရိမ်စိတ်ခြင်းကိစ္စ ပြီးဆုံးပါတော့သည်။ [ အဆုံးအထိ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ]
အခုရေးချလိုက်တာ ကဗျာမဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောမလဲ
ဟုတ်တယ် ၊ ကျွန်တော်ပြောမယ်
ဒါ … ကဗျာမဟုတ်ဘူး
အရည်တစ်စက်မှ မကျန်တော့တဲ့ ဖန်ခွက်တွေ ၊
ထွေးထားတဲ့ကွမ်းတံတွေးတွေ ၊ အခွံတွေ
“ဟံလင်း” မွေးနေ့မှာ ကဗျာဆရာများ စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ အနိဋ္ဌာရုံတွေ …
ဒါ … က ဗျာ မှ မ ဟုတ် တာ
ကျွန်တော်က ပြုံးပြုံးလေးနေတတ်တဲ့ အဆိုးမြင်ဝါဒီ ပဲ
ကဗျာ “သေ” နေတဲ့ကြားက ခင်ဗျားအတွက် ကျွန်တော် ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တယ် ။ ။
ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက် ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်
|၁၈ ရက်နေ့ ညဦးပိုင်း မောရွှေလီ စားသောက်ဆိုင်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ကဗျာဆရာ “ဟံလင်း” မွေးနေ့မှာ အမှတ်တရ ရေးပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဗျာ|
အွန်လိုင်းကဗျာဟု ခေါ်ချင်ချင်မခေါ်ချင်ချင် ခေါ်နိုင်ပါသည်
“အွန်လိုင်းကဗျာဟု ခေါ်ချင်ချင်မခေါ်ချင်ချင် ခေါ်နိုင်ပါသည်”
<h1 align=”center”>စပြီးရေးပြီဆိုတော့ သူလိုကိုယ်လို ကဗျာများလိုပဲ ခေါင်းစဉ်စတပ်ရပါတယ်</h1>
<p>အောက်ကို တစ်ကြောင်းမက နှစ်ကြောင်း သုံးကြောင်းလောက် ဆင်းမယ်ဆိုတော့ ဟောဒီလို ဟောဒီလို လုပ်ထည့် လိုက်ပါတယ်</p>
ခက်တာပဲ ….. အွန်လိုင်းပိုအက်ထရီဆိုတာ <blink>မှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ်ကြီး၊ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ကြီး</blink> အွန်လိုင်းကဗျာဆိုပြီး ကော်လာ့ခ်ျအမျိုးအစားတစ်ပုဒ် ချရေးတော့ အောက်ပါအတိုင်း
ကဲ .. ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဘာတွေလဲ၊ မတတ်နိုင်တော့ဘူး၊ မရှင်းနိုင်တော့ဘူး
<marquee>ကျွန်တော်တော့ ပြေးပြီဗျာ … ပြေးပြီ</marquee>
ဒီကောင်ဘာကောင်လဲမသိဘူးဆိုပြီး တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ဟောဒီလိုကျကျနန ဝိုင်းဝန်းဆဲရေး အားပေးကြပါတယ်
<ul>သူရဿဝါ … ဘာတွေရေးထားတာလဲ</ul>
<ul>ဒီကောင် လောက်စာလုံးပဲ .. ဒီကောင် ရေဘဝဲပဲကွ</ul>
<ul>ဟေ့ကောင် … သွား သွား မင်းမှာ Talent လည်းမရှိဘဲနဲ့</ul>
<ul>တော်ပါတော့ဗျို့ … ဗြဲ ……</ul>
ဘယ်လိုထင်သွားကြလဲတော့ မသိပါ .. အွန်လိုင်းကဗျာဆိုတာ <b>ဒါပဲ</b> လို့ ကျွန်တော် ရဲရဲဝင့်ဝင့် ပြောလိုက် ပါတယ်။ ဘာဝါဒမှ မပါပါ၊ ဒီအထဲက ဘာသီအိုရီမှလည်း ရှာလို့ရမယ် မထင်ပါ။ ဘာမှလည်း အခြေပြု မရေးသားပါ။ ဘာဆို ဘာမှကို မဟုတ်ပါ၊ အထွေအထူးလည်းမရှိပါ၊ အွန်လိုင်းပိုအက်ထရီ၊ အွန်လိုင်းပိုအက် ဆိုတာကို သူရဿဝါက တင်ဆက်/ တပ်ဆင်/ ပြသ/ သရုပ်ဖော်/ ရေးသားပြတာပဲဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
နောက်များမှာလည်း ယခုလို ပေါက်ကရလေးဆယ် (အွန်လိုင်း) ကဗျာများဖတ်လိုသည်ဆိုပါက မူလလက်ဟောင်း သူရဿဝါ <a href="http://www.thurathawah.net"> ရသစာပေအနုပညာဘလော့ဂ် </a> သို့ လာရောက်ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
- <h1> defines the largest heading in HTML
- The <p> element automatically creates some space before and after itself.
- The <br> tag insertsasingle line break.
- <marquee> createsascrolling display.
- <blink> is makes text blink and gives people headaches.
- lists, created using the <li> element, generally consist ofaseries of term/definition pairs
- The bold isatypeface with thick heavy lines
Android ဖုန်းအတွက် အလန်းဇယား Camera through wallpaper